Ego ole a na-emepụta na ntanetị na 60 Seconds? | Martech Zone
Ego ole a na-emepụta na ntanetị na 60 Seconds?
Tuesday, June 6, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala ntakịrị ntakịrị ihe na ọkwa m na nso nso a. Mgbe ebipụta kwa ụbọchị abụrụla akụkụ nke DNA m n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ama m aka na ịgbalite saịtị ahụ ma na-enye ọtụtụ atụmatụ. Dịka ọmụmaatụ, ụnyaahụ, m gara n'ihu na oru ngo iji jikọta ndụmọdụ ndị dị mkpa na saịtị ahụ. Ọ bụ oru ngo nke m tinyere ihe dịka otu afọ gara aga yabụ were m oge ederede m wee gbanwee ya oge nzuzo.
Ịtụrụ uche m? O yikarịrị ka ọ bụghị… enwere ọtụtụ ihe enyemaka dị ebe ahụ na-ebipụta ọdịnaya dị ịtụnanya. Anaghị m eche echiche ọ bụla na m pụtara dị ka nke kachasị mma - Ọ bụ naanị m na-ekerịta ihe m chọpụtara ma na-enyere aka ịkụziri ndị nke debanyere aha ma soro blog m ka m nwee ike ịnye gị nghọta gbasara ngwaọrụ na ozi dị n'ịntanetị nke m chọpụtara, nyocha , ma mụta banyere.
Nke ahụ kwuru, olu nke mkpọtụ amịpụtara bụ naanị ntị chiri anya… ọ nweghịkwa mma. Ndị folks na Moz mere BuzzSumo nyocha ọdịnaya zuru ezu wee chọta:
Ihe ka ọtụtụ azụmahịa metụtara posts bipụtara na-enweta mbak ole na ole na ọbụna njikọ dị ole na ole, ihe na-erughị mmekọrịta 2 na Facebook.
Ihe karịrị ọkara nke ihe niile azụmahịa metụtara azụmahịa nwere òkè 11 ma ọ bụ pekarịrị Ekwenyesiri m ike na ụfọdụ n'ime ihe a bụ n'ihi omume nke ndị ọrụ Twitter, mana ọ ka na-egosi mbọ na enweghị ụlọ ọrụ weghachite.
N'ime 75% nke posts azụmahịa nwere efu mpụga njikọ yabụ ọ bụrụ na ebumnuche ahụ na - achọpụta ọchụchọ… imerime azụmaahịa na - akụda mmụọ nke ọma na ịnweta okporo ụzọ.
85% nke ederede ederede nwere ihe na-erughị okwu 1,000 n'agbanyeghị ihe karịrị 1,000 okwu na-anakwere karia mbak na njikọ.
Ikpe maka obere ọdịnaya
N'isi afọ a, anyị bidoro usoro ịntanetị maka a nchịkwa pesti ụlọ ọrụ ebe a na Indianapolis. Usoro ha gara aga bụ plethora oge ochie nke ọtụtụ ngalaba na ọtụtụ puku n'ime, ibe-ọgaranya isiokwu. Ọ bụ igwe dị ọdịnaya na-agba ọsọ ruo ọtụtụ ọnwa iji nwaa ịghọ aghụghọ algọridim… ma ọ naghị arụ ọrụ. Ebe nrụọrụ ahụ gbagoro n'usoro wee daa n'otu ebe enwere ike ịchọta ya na ndeksi.
Anyị nyochara ụlọ ọrụ mpaghara niile na ọdịnaya metụtara ya nke ha mepụtara n'ịntanetị iji nweta ọkwa dị elu site n'aka onye ahịa ọhụrụ anyị. Anyị ji obi eziokwu chọta ọtụtụ ọdịnaya ebe ahụ - mana pere mpe ma ọ bụ peeji pere mpe. Kama ịgbakwunye na mkpọtụ ahụ, anyị mere nyocha n'otu isiokwu n'otu oge wee mepụta ọba akwụkwọ ọdịnaya pests edere ya na ọchị, gụnyere ọtụtụ visuals, anyị bidoro ịmepụta infographics na ndepụta maka saịtị ahụ.
Ihe si na ya pụta bụ na, n'ime ọnwa ole na ole, saịtị ahụ na-achịkwa ọkwa. Ọ bụ nnukwu ọrụ siri ike ma ọdịnaya ahụ na-ewe oge ma dị oke ọnụ… mana nsonaazụ ya bụ na ọ rụrụ ọrụ. Mpekarị ọdịnaya nwere ike ịmepụta ukwuu Azụmaahịa na-arụpụta mgbe etinye mbọ n'ime ya.
Ka ị na-ele anya na infographic a ma hụ ọnọdụ nke okike ọdịnaya n'ime otu nkeji na webụ n'ime afọ ole na ole gara aga, enwere ohere dị egwu. Mepụta dị ịrịba ama ọdịnaya na gị ọdịnaya ga-abụ eze n'etiti pawn.
Ihe omuma ihe omuma nke anyi nke ‘60 ’n’ahu ihe n’eme naani otu nkeji na web. Onu ogugu nke nyocha Google, ozi Facebook na ozi WhatsApp ezigara na 60 sekọnd bu ihe di egwu! Nke izizi ebipụtara n'afọ gara aga, anyị emelitere ugbu a maka 2017, na-egosi ọnụọgụ afọ atọ gara aga. Robert Allen, Smart nghọta.
Gini Na-eme Na ntanetị n'otu nkeji?
Tags: 20142015201660 sekọndọdịnaya e kereọnọdụ ọdịnayaemail olu site na afọozi ịntanetịozi ịntanetị ezigara na otu nkejiFacebookozi facebookgoogle na-acho kwa nkejioge nke ọdịnayainfographicinstagram kwa nkejiLinkedInozi zigaraotu nkejibipụtara postselekọta mmadụ mediastatsngụkọta ozi ịntanetị ezigaraTweets kwa nkejiTwitterkwadorowhatsappokwu ọnụederede WordPressyoutube
Etu esi ewu Njikọ Nyocha maka Google, Bing, Yelp, na More…